Mac Mini ma dhiman, noolow Mac mini | Waxaan ka socdaa mac
Mac Mini ma dhiman, noolow Mac mini
Markii ay u muuqatay in Apple ay qorsheyneyso inay joojiso Mac mini, ama ay u muuqato maqnaansho war, dhowr saacadood ka hor, Maamulaha Apple laftiisu wuxuu ka hadlayaa qayb muhiim ah oo ka mid ah mustaqbalka Apple. Tani waa war weyn u ah isticmaaleyaal badan oo Mac ah oo ku raaxeysta Mac mini-ga hadda jira, taas oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta ay qalabkani ku siinayo. Xulashada shaashadda, wareejinta, iwm. iyo dabcan, waxay sidoo kale u adeegtaa talo ahaan saaxiibkii doonaya inuu tijaabiyo Mac, laakiin ma doonayo inuu lacag badan gashado ka hor intaanu ogaan inuu ku qanco iyo in kale.
Justo kaliya seddex sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay ee Mac mini. Si looga takhaluso shakiga, isticmaale ayaa email ugu soo qoray Tim Cook laftiisa (dhowr toddobaad ka hor Cook laftiisa ayaa faallo ka bixiyay inuu jecel yahay inuu akhriyo emaylka isticmaalaha waxa ugu horreeya subaxnimada) wuxuuna ku jawaabay "ma ahayn xilligii la wadaagi lahaa wixii faahfaahin ah "Laakiin waxay xaqiijisay in Mac mini uu qayb muhiim ah ka noqon doono qadka wax soo saarka shirkadda mustaqbalka.
Tani maahan wax ka badan xaqiijinta qaybta sii socoshada Mac mini. Toddobaadyo ka hor, isaga ayaa iska leh Phil Schiller wuu naga rajeeyay:
Mac mini waa shey muhiim u ah khadkeena kumana xusin maxaa yeelay waxaan ka shaqeyneynaa sameynta wax soo saar isku jira isticmaalka guriga iyo adeegsiga xirfadeed.
Iyo sida muuqata, mishiinku wuxuu ubaahanyahay cusbooneysiin sida uu uqalmo, maxaa yeelay in kasta oo adeegsadayaal badani beddeleen qayb kasta oo la horumarin kari lahaa, nooca hadda jira ayaa isku dhafan processor-ka Haswell iyo Intel HD 5000.
Intaa waxaa sii dheer, iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda, waxaa suurtagal noqon doonta in la arko mustaqbalka Mac yar yar, ku soo dhowaanaya cabirka Apple TV. Si kastaba ha noqotee, ma hayno wax xan ah oo ku saabsan cusbooneysiinta qalabka cusub, sidaa darteed ma fileyno qalab cusub illaa ugu yaraan rubuca koowaad ee 2018. Tan iyo markii aan sugnay mudada dheer, ugu yaraan qalabka cusub waa inuu lahaadaa chips Kaby Lake oo la hagaajiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Mac Mini ma dhiman, noolow Mac mini
Apple Watch LTE ee Shiinaha ayaa joojisay shaqadii
Podcast 9 × 07: Apple wuxuu dhageystaa isticmaaleyaasha oo wuu saxaa